Ndị uweojii n'Abuja anwụchiela mmadụ isii a na-ebo ebubo na ha bụ ndị oji egbe aga, nwetakwala ihe ngosi
Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uweojii na-ahụ maka ndị isi obodo jidere mmadụ isii na-enyo enyo na ha nwere 'otu ohere' égbè ezu ohi tinyere okporo uzo Zuba na Lugbe nke Abuja.
Ishmael Peter, nwoke gbara afọ iri atọ na otu, na Omeka Kadiru, nwoke gbara afọ 31, so na ndị a na-enyo enyo. Ndị uweojii na-ahụ maka ugo na-ele ha anya site na Zuba Division na-agagharị oge niile na mbido ụtụtụ Tọzdee, Eprel 20, 29, mgbe ha na-anwa ịchụpụ ndị ha bu ngwongwo ha.
E gosipụtara nke a na nkwupụta nke ASP Yusuf wepụtara Mariam, Onye uweojii na-ahụ maka mmekọrịta ndị mmadụ.
"Ndị ahụ na-enyo enyo bụ ndị mere onwe ha ka ndị ọkwọ ụgbọala na-azụ ahịa kwetara na ha na-arafu ndị ha na-amaghị ama (ụmụ nwanyị) n'ime ụgbọ ọrụ ha tupu ha emee omume ha jọgburu onwe ya," dịka akwụkwọ ahụ siri kwuo. Ngosipụta ndị enwetara gụnyere Toyota Corolla uhie na nọmba ndebanye aha BWA 782 BD, egbe egbe a na-akpọ Beretta, egbe egbe isii nke mgbọ dị ndụ, plọp, ngwongwo, kaadị ATM abụọ, okpu mkpuchi na akwa uwe, nọmba atọ dị iche iche, ntutu mmadụ asaa-WEAVES, ekwentị mkpanaka iri, ụyọkọ igodo , akpụkpọ ụkwụ nwanyị abụọ, akpa aka nwanyị anọ, na ego nke $ 128,000.
“N'otu aka ahụ, ndị uwe ojii sitere na Ngalaba Lugbe jidere otu Emmanuel Joseph, onye gbara afọ 26, Daalụ Abam, 26 afọ, Gabriel Joshua, 27 afọ, na Ekene Nwatu, 31 afọ, ha niile bụ nwoke, maka izu ohi. Ndị omekome ahụ kwetara na ha na -eyi egwu egwu Lugbe axis na irigbu ndị aka ha dị ọcha. Ngosipụta
“N’ime ihe ngosi a napụtara n’aka ndị a na-enyo enyo bụ Toyota Corolla na-acha uhie uhie nwere nọmba ndebanye aha ya bụ BDG 648 EZ, TV plasma isii, ọla, na ihe ndị ọzọ e ji ebi n’ụlọ.
“Emechaa nyocha ahụ, a ga-akpụpụ ndị a n’ụlọ ikpe.
Na mgbakwunye, Iwu ahụ chọrọ ka ekwughachi mmachi na iji akara akara e mechiri emechi n'ime FCT, n'ihi na a ga-ejide ma kpoo ndị dara iwu ahụ. "
Tọrọ Mmadụ: E gburu onye ọzọ na-azụ anụ n’ egbe ọgụ ya na ndị uwe ojii; a na-ejide otu June 6, 2021
Na Cross River, ndị uwe ojii jidere nna nna, ndị nwunye, na nwa nwoke maka ịtọrọ mmadụ. April 27, 2021
Ndị a na-enyo enyo na Osun kpughere ili na-adịghị emi na Benue nke nwere ndị nwunye, tinyere mmadụ anọ ndị ọzọ Nwere ike 12, 2021
Aso Rock: oflọ nke onyeisi ndị ọrụ Buhari, Gambari, na onye isi nchịkwa Maikano Ndị ndị oji egbe ji obi agha. Nwere ike 10, 2021
Senator, onye ndị ohi jidere ndị convoy ya, na-azọrọ na ọ na-emerụ ahụ April 29, 2021
Ọ naghị eju anyị anya na ịta ahịhịa na ndị Fulani na-achị ehi na-akwado Malami - HURIWA Nwere ike 20, 2021
Tags:égbè ezu ohi, lugbe, mariam, nọmba ndebanye aha, daalụ abam